Koorsooyinka Dibloomada Jaban ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah 11
Haddii aad rabto inaad wax ku barato Kanada oo aadan awoodin, waa inaad fiirisaa liiska koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee looga hadlay boggan. Waxaa laga yaabaa inaad hesho wax soo jiita xiisahaaga oo faahfaahin ayaa laga bixiyay sida loo qoro koorsooyin kasta oo diblooma ah si ay kaaga caawiso inaad bilowdo.
Diblooma waa shahaado ay bixiso hay'ad waxbarasho, sida caadiga ah machad xirfadeed iyo tababar, kulliyadaha bulshada, iyo kulliyadaha iyo jaamacadaha qaarkood, si loo muujiyo in qof uu dhammaystay koorso waxbarasho. New York waxay leedahay dugsiyo xirfadeed oo aad u wanaagsan waad iska qori kartaa
Waxay sidoo kale sii socotaa inay muujiso inaad aqoon aqooneed u leedahay maaddo gaar ah. Waxaad ku dari kartaa dibloomaadaada CV-gaaga fursado shaqo oo dhanka shaqaalaha ah waxaadna cadeyn kartaa heerkaaga xirfadeed macaamiisha mustaqbalka iyo kuwa loo shaqeeyeyaasha ah. Caadi ahaan, waxay qaadataa 12 illaa 18 bilood oo ah daraasad waqti-buuxa ah si loo dhammaystiro loona kasbado diblooma.
Goobaha waxbarasho ee xirfadaha iyo tababarka, iyo laga yaabee kulleejooyinka iyo jaamacadaha, waxay u badan tahay inay bixiyaan barnaamijyo diblooma ah oo koorsooyin ah kuwa aad xiiseyneyso gobolkaaga. Ka dib ayaa su’aal laga qabaa “Maxaad Kanada ugu tagaysaa koorso diblooma ah?”
Xaqiiqdii, waxaa jiri doona sababo shaqsiyadeed oo sharci ah oo la imaan doona jawaabtaas, sababo kale ayaa sidoo kale noqon kara:
Kanada waa mid ka mid ah saddexda xarun waxbarasho ee ugu sareysa adduunka sidaa darteed hay'adaheeda waxbarashadu waxay hayaan haybad caalami ah iyo sidoo kale shahaadooyinka iyo dibloomooyinka ay bixiyaan.
Hay'adaha Canadian-ka waxay bixiyaan waxbarasho heer caalami ah oo dhinacyo badan oo barasho ah, oo ay kujiraan koorsooyin diblooma, mid ka mid ah sababaha ay hay'aduhu ugu sarreeyaan adduunka.
Helitaanka shahaado, diblooma, ama shahaado nooc kasta ha noqotee hay'ad kasta oo Canadian ah oo la aqoonsan yahay waxay kaa kasbataa ixtiraam badan oo aad ka hesho asxaabtaada, xubnaha qoyskaaga, asxaabtaada, shaqaalaha, iyo macaamiisha.
Sidoo kale waa inaad tixgelisaa sababahan haddii aad tixgelinayso inaad wax ku barato diblooma ama barnaamij kasta oo shahaado ah oo ka baxsan waddankaaga.
Si kastaba ha noqotee, barashada shahaadada diblooma ee waddankaaga waa in sidoo kale la tixgeliyaa. Wax ku barashada wadan kale waa qaali sidoo kale waxaa jira arin laxiriira dhaqanka cusub iyo cuntada, sameynta saaxiibo cusub, iyo waxyaabo kale oo la yimaada joogitaanka meel cusub. Laakiin, in yar ka dib, waxay bilaabaysaa inay noqoto waayo-aragnimo xiiso leh.
Haa, waa qaali wax ku barashada dalka dibadiisa waxaa jira khidmadaha waxbarashada, kharashka duulimaadka, kharashka hoyga, iyo kharashyada guud ee nolosha. Adiga oo ah arday caalami ah, khidmadda waxbarashada ayaa xitaa kaaga sii sareysa oo markaad rabto inaad wax ku barato waddan sida Kanada, Mareykanka, ama Australia, way qaali yihiin.
Wax ka barashada shahaado ama shahaado diblooma oo Kanada ah ayaa qaali ah marka aad isku darto kharashyada oo dhan. Si kastaba ha noqotee, annaga oo ah Daraasadaha Dibedda ee Dibadda ayaa qodnay qoto dheer oo u soo bandhignay akhristayaashayada liisaska koorsooyin diblooma oo raqiis ah oo Kanada loogu talagalay ardayda caalamiga ah.
Taasi waa, koorsooyinka diblooma ee ku taxan boostadan ayaa ah kuwa ugu jaban ee lagu barto Kanada gaar ahaan ardayda caalamiga ah. Kharashaadka kale sida duulimaadka, hoyga, iyo kharashyada nolosha ayaa ah kuwo qaali ah oo aan lagu darin.
Kahor intaanan u gudbin ka hadalka koorsooyinkan dibloomaasiga ah ee raqiiska ah ee Kanada loogu talagalay ardayda caalamiga ah, aan si dhakhso ah u eegno Su'aalaha hoos ku qoran.
1 Diblooma ma u qalantaa Kanada?
2 Waa imisa qiimaha diblooma ee Kanada?
3 Waa kuwee diblooma ugu raqiisan Kanada?
4 Koorsooyinka Diblooma Dibloomada ee Kanada ee Ardayda Caalamiga ah
4.1 Tababbarka Kalkaalinta Caafimaadka ee Kanada ee Kulliyadda Langara
4.2 Dibloomada Adeegga Aadanaha ee Kuleejka North Island
4.3 Naqshadaynta Dibloomada Dharka ee Dugsiga Filimada ee Toronto
4.4 Dibloomada Farshaxanka Fiican ee Kuleejka North Island
4.5 Shahaadada Maamulka Dhismaha ee Kulliyadda Centennial
4.6 Nadaafadda ilkaha ee Fanshawe College
4.7 Teknolojiyada dhirta ee jaamacadda Kwantlen Polytechnic
4.8 Suxufiga ee St. Clair College of Applied Arts & Technology
4.9 Xirfadaha Cunnada ee Kulliyadda Centennial
4.10 Dibloomo ku takhasusay iskaashiga amniga internetka ee Iskuulka Maamulka ee Toronto
4.11 Dibloomada Isku-xidhka Ciyaaraha Ciyaaraha Fiidiyowga (Online) ee Dugsiga Filimada ee Toronto
Diblooma ma u qalantaa Kanada?
Kasbashada diblooma Kanada dhexdeeda runtii waa u qalantaa waxaanan kor ku soo xusay qaar ka mid ah sababaha ay tahay inaad uga fiirsato helitaanka diblooma Kanada. Kasbashada dibloomadaada Kanada si otomaatig ah ayey kaaga hormarineysaa tartanka shaqaalaha iyo HRs ee urur kasta sidoo kale way aqoonsan doonaan.
Waa imisa qiimaha diblooma ee Kanada?
Kharashka ku baxa diblooma ee Kanada wuxuu u dhexeeyaa C $ 13,000 iyo C $ 30,000. Waxbarashada si aad ugu kasbato diblooma xarun waxbarasho oo Kanada ku taal inta badan way kala duwan yihiin, waa inaad la xiriirtaa hay'addaada si aad u ogaato qiimaha gaarka ah ee looga baahan yahay dhammaystirka barnaamijkaaga diblooma.
Waa kuwee diblooma ugu raqiisan Kanada?
Jaamacadda Mennonite waxay bixisaa diblooma ugu raqiisan Kanada ardayda caalamiga ah ee C $ 10,003 ee shahaadada koowaad iyo $ 7,680 ardayda qalin jabisa.
Su'aalahan soo noqnoqda waa inay sii caawiyaan go'aankaaga ku saabsan barashada diblooma ee Kanada.
Oo hadda, iyada oo aan la sii ambaqaadin, aan sii wadno ka wada hadalka koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah.
Koorsooyinka Diblooma Dibloomada ee Kanada ee Ardayda Caalamiga ah
Hoos waxaa ku yaal liiska iyo faahfaahinta 11 koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee lagu soo qaatay nidaam gaar ah:
Tababbarka Kalkaalinta Caafimaadka ee Kanada ee Kulliyadda Langara
Dibloomada Adeegga Aadanaha ee Kuleejka North Island
Naqshadaynta Dibloomada Dharka ee Dugsiga Filimada ee Toronto
Dibloomada Farshaxanka Fiican ee Kuleejka North Island
Shahaadada Maamulka Dhismaha ee Kulliyadda Centennial
Nadaafadda ilkaha ee Fanshawe College
Teknolojiyada dhirta ee jaamacadda Kwantlen Polytechnic
Suxufiga ee St. Clair College of Applied Arts & Technology
Xirfadaha Cunnada ee Kulliyadda Centennial
Dibloomada Isbahaysiga Khabiirka Nabadgelyada Amniga ee Iskuulka Maareynta ee Toronto
Dibloomada Isku-xidhka Ciyaaraha Ciyaaraha Fiidiyowga (Online) ee Dugsiga Filimada ee Toronto
Kuleejka Langara wuxuu bixiyaa Tababbarka Kalkaalinta Caafimaadka ee Kanada waana mid ka mid ah koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada loogu talagalay ardayda caalamiga ah. Dibloomada waxaa loogu talagalay inay si wax ku ool ah ugu diyaariso Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka ee Caalamiga ah (IEN) u-qalmitaanka iyo codsi ruqsad siinta kalkaalisooyinka iyo jagooyinka tababarka kalkaalinta.
Diiwaangelinta barnaamijkan waxay horumarin doontaa fikirkaaga muhiimka ah, xukunka daaweynta iyo go'aan gaarista, isgaarsiinta afka iyo qoraalka, iyo badbaadada dhaqameed ee lagu dabakhayo goobta daryeelka caafimaadka. Dibloomadu waxay qaadataa 2 sano in la dhammaystiro.
Ardayda mustaqbalka dhow ee caalamiga ah waa inay qaataan imtixaanka aqoonta luqadda Ingiriisiga, sida IELTS ama TOEFL, Bachelor of Science Nursing, ama diblooma seddex sano ah oo ku saabsan Kalkaalinta Caafimaadka afartii sano ee la soo dhaafay si loo tixgeliyo gelitaanka.
Tababbarka Kalkaalinta Caafimaadka ee Kanada ee barnaamijka diblooma ee Langara College ayaa ka dhigtay liistadan koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah sababtoo ah khidmadda waxbarashada hoose ama jaban. Waxay ku kacaysaa $ 590 halkii deyn.
Barnaamijka Adeegga Aadanaha ee Waqooyiga Island College waa mid ka mid ah koorsooyinka diblooma ee diblooma ee raqiiska ah ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee qaadata 2 sano in la dhammaystiro, habka gudbintana ay ku taal xerada iyo dijitaalka. Dibloomada ayaa ku qalabeyn doonta xirfado iyo aqoon aad kaga shaqeyn karto hay'adaha adeegga aadanaha ee bixiya taageerada bulshada, kaalmada waxbarashada, adeegyada bulshada, iyo faragelinta anshaxa.
Shuruudaha gelitaanka waxaa ka mid ah buuxinta shuruudaha aqoonta luqadda Ingiriisiga adoo qaadanaya TOEFL (ibt), IELTS, ama CAEL oo leh celcelis ahaan dhibcaha 80, 6.0, ama 60 siday u kala horreeyaan labadii sano ee la soo dhaafay. Dhameystirka Kaaliyaha Waxbarashada / Shahaadada Taageerada Bulshada, Diirada Dadka Asaliga ah, ama Adeegyada Aadanaha ee u dhigma 5tii sano ee la soo dhaafay ugu yaraan C (60%) koorso kasta.
Dibloomada Adeegga Aadanaha ee Waqooyiga Island College ayaa ka dhigtay liiskan koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah sababtoo ah khidmadda waxbarashada hoose ama jaban. Waxay ku kacdaa $ 22,140 sanadkii.
Cudurka faafa ee Covid-19 awgood, Iskuulka Filimada ee Toronto ayaan wali si buuxda loogu furin hawlgallada daraasadda khadka tooska ah. Si kastaba ha noqotee, koorsooyin badan oo ay ka mid yihiin Naqshadaynta Dibloomada Dharka ayaa laga qaaday khadka tooska ah sidaas darteed, waxaad ku kasban kartaa diblooma khadka tooska ah. Barnaamijku wuxuu u baahan yahay 24 bilood iyo 8 xilli in la dhammaystiro.
Dibloomada Naqshadeynta Naqshadeynta ee Filimka Toronto Filimku wuxuu ku wajahan yahay naqshadeeyaha soo socda ee doonaya inuu kobciyo xirfadahooda ganacsiga moodada ah wuxuuna ku barayaa qaabeynta iyo u sameynta dharka naftaada, asxaabtaada, iyo ugu dambeyn macaamilka. Dibloomada ayaa ka mid ah koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada loogu talagalay ardayda caalamiga ah, barnaamijka waxbarashadu waa $ 15,360.
Shuruudaha gelitaanka ayaa ah in si fudud loo qoro ereyo 300-500 oo ku saabsan naqshadeeyaha aad jeceshahay iyo sababta, oo aad u bixiso lacag dalab ah $ 100.
Dibloomada Farshaxanka ee Farshaxanka ah ee North Island College waa mid ka mid ah koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada loogu talagalay ardayda caalamiga ah. Dibloomada waxay bixisaa waxbarasho diirad saarid xirfad leh oo kobcisa xalinta dhibaatooyinka adag, fekerka muhiimka ah, iyo xirfadaha cilmi baarista iyo istuudiyaha. Sidoo kale horumarinta xirfadaha halista ah iyo aragtida ee noocyo badan oo dhexdhexaadin ah oo kakooban dhaqanka, takhasuska, iyo dhaqanka farshaxanka dhijitaalka ah.
Dhererka barnaamijka waa 2 sano waxaana lagu soo gudbiyaa xerada iyo xulashooyinka dhijitaalka ah. Shuruudaha aqoonta ayaa looga baahan yahay aqoonta luqadda Ingiriisiga. Waxaad ku qaadan kartaa TOEFL (ibt), IELTS, ama CAEL celcelis ahaan dhibcaha 80, 6.0, ama 60 siday u kala horreeyaan oo la qaatay labadii sano ee la soo dhaafay. Shuruudaha kale waxaa ka mid ah faylalka shaqooyinka iyo qoraal qoraal ah.
Dibloomada Farshaxanka ee Farshaxanka ah ee Kuleejka North Island ayaa ka dhigtay liiskan koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah sababtoo ah khidmadda waxbarashada hoose ama jaban. Waxay ku kacdaa 14,045 sanadkii.
Kulliyadda Centennial waxay bixisaa mid ka mid ah koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah, Shahaadada Maareynta Dhismaha, oo u baahan 1 sano si loo dhammaystiro. Barnaamijku wuxuu bixiyaa xirfado ku saabsan arrimaha anshaxa, welwelka sharciga, iyo mashaariicda bey'ada waarta si laguu siiyo shahaado dhameystiran oo ku saabsan dhismaha iyo maaraynta mashruuca.
Shuruudaha gelitaanka waa caddayn aqoonta Ingiriisiga, qoraalka ama dib-u-bilaabista, iyo jaamacad ama kulleej cilmiga dhismaha, injineernimada, ama u dhigma dhismaha la mid ah. Kharashka waxbarashada waa C $ 11,400 laba xilli-dugsiyeed.
Barnaamijka Nadaafadda Ilkaha ee Fanshawe College waa mid ka mid ah koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada loogu talagalay ardayda caalamiga ah. Barnaamijka dibloomada wuxuu ardayda siiyaa xirfadaha iyo aqoonta looga baahan yahay inay ugu dhaqmaan sidii bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka afka aasaasiga ah ee deegaanno kala duwan oo tababar ah, oo ay ku jiraan kiliinikada, waxbarashada, kor u qaadida caafimaadka, iyo cilmi baarista.
Dibloomadu waxay ku jirtaa qaybta daryeelka caafimaadka sidaa darteedna waxay u baahan tahay 3 sano oo daraasad waqti-buuxa ah si loo dhammaystiro koorsada. Kharashka waxbarashada waa C $ 7,596 sanadkii. Aqoonta luuqada Ingiriisiga ayaa loo baahan yahay iyo sidoo kale shuruudaha gelitaanka kale ee la heli karo halkan.
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee loogu talagalay in lagu baro ardayda sida loo isticmaalo aaladaha iyo teknoolojiyada kuwaas oo ah qayb maalinle ah oo ka mid ah dhaqanka warshadaha. Waxay sidoo kale u baahan tahay laba sano oo waxbarasho waqti-buuxa ah si loo dhammaystiro.
Kharashka waxbarashada ee barnaamijkan waxaa loo dejiyey $ 46.98 halkii deyn.
Suxufinimada St. Clair College of Applied Arts & Technology waa mid ka mid ah koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada loogu talagalay ardayda caalamiga ah. Dibloomada ayaa ardayda siin doonta aqoon heer sare ah iyo xirfado ka dhigaya kuwo si heer sare ah looga iibin karo dhammaan barnaamijyada.
Adoo sifiican u yaqaana luuqada Ingiriiska iyo xirfadaha hal abuurka, waxaa lagugu tixgelin karaa inaad iskuqorto barnaamijkaan oo aad noqoto wariye khibrad leh oo leh xirfado shaqo oo qolka wararka ee 21st qarnigii.
Haddii cunto karintu had iyo jeer ahayd shaygaaga ama aad horeyba ugu jirtay berrinka oo aad rabto inaad kobciso xirfadahaaga oo aad hoggaanka u qabato mid ka mid ah maqaayadaha ugu fiican, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku booddo barnaamijkan. Xirfadaha Cunnada ee Kulliyadda Centennial waa mid ka mid ah koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada loogu talagalay ardayda caalamiga ah. Waxaad ku baran doontaa xirfadaha cunno karin heer caalami ah qiimo yar.
Barnaamijku waa mid si fiican loo soo koobay oo waxay qaadan doontaa hal sano oo keliya in lagu dhammaystiro kaliya 2 semesters iyo khidmadda waxbarashada ee $ 14,502.50 sanadka.
Dibloomo ku takhasusay iskaashiga amniga internetka ee Iskuulka Maamulka ee Toronto
Tani waa mid ka mid ah diblooma ugu raqiisan Kanada ardayda caalamiga ah, waxay qaadataa toddobaadyo 51 si loo dhammaystiro, waxayna ku habboon tahay ardayda raadinaya inay helaan xirfado dalab iyo aqoon khaas ah dhammaan dhinacyada amniga internetka. Dhinacyada waxaa ka mid ah xannibaadda, maareynta halista, xogta weyn, iyo IoT (Internetka Waxyaabaha) iyo adiga oo kuu diyaarinaya fursado shaqo.
Aqoonta Ingiriisiga ee adag waxaa looga baahan yahay celcelis ahaan dhibcaha IELTS ee 5.5 ama u dhigma, qoraal, diblooma, ama caddeyn waddan kale oo u dhiganta dibloomaha dugsiga sare ee Ontario haddii lagu qiimeeyo adeeg qiimeyn la aqoonsan yahay. Kharashka waxbarashada waa C $ 10,995 ardayda caalamiga ah.
Dibloomada Wadajirka ah ee Ciyaaraha Ciyaaraha Fiidiyowga ee Dugsiga Filimada ee Toronto waxaa lagu qabtaa khadka tooska ah iyadoo lagaa dhigayo inaad kaqeyb gasho meel kasta oo aad adduunka ka joogto. Barnaamijku wuxuu kugu diyaarin doonaa xirfadaha xirfadeed si aad u noqotid animator oo aad saameyn ugu yeelatid warshad si xawli ah u socota. Muddada barnaamijka waa 2 sano oo leh 8 shuruudood.
Codsadayaasha waxaa looga baahan yahay inay qoraan qormo kooban oo ah 300-500 erey oo sharaxaya yoolalkaaga shaqsiyeed iyo xirfadeed ee ciyaaraha fiidiyowga. Kharashka waxbarashada waa $ 20,160 sanadka 2 oo dhameystiran.
Kuwani waa koorsooyinka diblooma ee raqiiska ah ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah, faahfaahinta iyo sidoo kale isku xirka arjiga ee mid kasta oo ka mid ah koorsooyinka diblooma ee la siiyay si ay uga caawiso fududeynta gelitaankaaga iyo helitaanka xirfado bilaabi doona bilowga shaqadaada. Koorsooyinkan dibloomaasiga ah ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah waxay kugu hagaajin doonaan waddo wanaagsan oo wanaagsan waxayna ku dhisi doonaan xirfad guuleysi leh.
Top 10 Jaamacadaha ugu Raqiisan Australia oo leh Kharashyadooda Waxbarashada
10 Degree Degree Degree ah ee Masters Degree ah ee Australia oo ay la socoto deeq waxbarasho
Kulliyadaha Khadka Tooska ah ee Qiimaha La'aanta
Barashada Hagaha Dibadda Barashada Kanada | Gelitaan | Deeqaha waxbarasho | Khidmadaha | Deeqo iyo Deymo wax ku barta internetka
koorsooyin diblooma ah oo raqiis ah oo Kanada loogu talagalay ardayda caalamiga ahkoorsooyinka diblooma ee ugu raqiisan Kanada ardayda caalamiga ah
Previous Post:15 Dugsiyada Hoose ee ugu Fiican Toronto
Post Next:7 Jaamacadood oo leh Awoodo Waawayn midkiiba Ardaygii Dunida
Cho Zin Oo wuxuu leeyahay,
June 19, 2021 at 3: am 50
Waxaan rabaa inaan ku barto Koorsooyinka Dibloomada Kanada. Waxaan rabaa inaan ku helo shahaadada bilaash. Waa inaan isku dayaa Fadlan fursad isii.